Izibonelelo zamahhala zinokuthi zithathwe nje zihambelana nezifundo ezihlelekile
Ikhululekile ayisoloko ithetha kakuhle. Ngelixa ungahlawuli nto, umniki-nkqubo mhlawumbi wenza imali enempilo kwizivumelwano ezilandelayo. Ngaba "bafunde isiFrentshi mahhala" banikela ngemveliso esemgangathweni? Makhe sijonge kweli hlabathi ukuze sibone ukuba lilungele ixesha lomqali.
Qala u-cavesat: Kukho izixhobo ezininzi ezizizibonelelo ezikhululekile kwiintetho eziphambili zesiFrentshi. Apha, sigxininisa kwiimithombo ezifumanekayo ezifumanekayo kumfundi wokuqala wesiFrentshi.
Ifowuni yeFree / Skype Conversation Exchanges
Iziza ezininzi ezinikela ingxoxo yeelwimi ziyachuma. Esi sisisombululo esinamandla kwizivakalisi eziphambili ezifuna ukuthetha rhoqo kumntu wangempela. Ngelishwa kubaqalayo, unemiqathango yalo: Umntu kwenye indawo ekupheleni komgca awutitshala. Akakwazi ukuchaza iimpazamo zakho kwaye mhlawumbi akanakho ukulungelelanisa yakhe isiFrentshi kumgangatho wakho wokuqala. Oku kungonakalisa ukuzithemba kwakho, kukwenze uzive ungekwazi ukuthetha isiFrentshi, xa ngokwenene, ngokukhuthazwa kunye nenkqubo ehleliweyo, unako.
Iiprocasts zamahhala, iiBlogs, iividiyo ze-YouTube
Iipodcasts kunye nevidiyo ziyindlela emnandi yokuphucula iFrentshi yakho, kodwa ilungile nje ngomntu owenzayo. Kulula ukulahleka kumnandi wokuxhuma kwikhonkco ukudibanisa, uze ukhohlwe ukuba ukhona ukufunda isiFrentshi. Ngoko rhoqo qiniseka ukuba usebenza kunye nesibonelelo esifanelekileyo kwinqanaba lakho, kwaye njengaye nayiphi na isandi, qiniseka ukuba isithethi sinomxholo omele ufunde.
Ngamanye amagama, ngaba lesi sikhulumi saseFrench saseFransi, iKhanada, iSenegal okanye yintoni? Gcina ukhumbule ukuba kukho ezininzi iziFrentshi ezihlukeneyo ngaphandle apho, ngoko ungakhohlisi. Kwakhona, qaphela iincwadana zesiNgesi ezizimisele ukuzama ukufundisa isiFrentshi.
Izifundo zamaFrentshi zeFree Online
Namhlanje, nazo zonke iinjongo zezifundo zolwimi, unyakaziswa ngolwazi kunye nezifundo ze-intanethi.
Ukufikelela kwi-info akuyona ingxaki. Iyintoni ingxaki ekuluququzeleleni kwaye ichaza umxholo ngendlela elula, ecacileyo. Utitshala olungileyo ngendlela efanelekileyo kufuneka akuncedise ukulungelelanisa iingcamango zakho, ekukhokele ngokuthe ngenyathelo ngenqanaba lokufunda eliqinisekisiweyo kwaye uhlale uqinisekisa ukuba uqhube isinyathelo ngasinye ngaphambi kokuba uqhubele phambili. Ngoko ke ukubonelela ngcaciso kuphela kwisiqingatha somsebenzi titshala.
Ngoko bulumko. Fumana iwebhusayithi efanelekileyo. Emva koko utyalomali kwindlela yokulalelwayo, iklasi yeqela okanye izifundo ezizimeleyo zokukukhokela kwindlela yokufunda enengqiqo.
Iincwadi zesiFrentshi zamahhala
Uncwadi lwesiFrentshi lunzima kakhulu kubaqalayo bokwenyaniso. Nangona ihle kodwa iphakanyisiwe kakhulu " le Petit Prince " ingaba yincinci. Ingaba ucinga ukuba, umzekelo, "Kungabikho nto leyo ukuba ndiyifumane i-mille milles de tous les endroits habités" kwisivakalisi somqala? Kunzima kunabanye iincwadi zeencwadi zesiFrentshi, kodwa akukafaneli ukuba ngumqali. Kukho amaxesha amaninzi ancedo kunye nesigama sokugxila kwilo nqanaba.
IRadio Radio, amaphephancwadi, iiMagazini, iiFilimu
Ezi ziwela kwinqanaba lokuzonwabisa kunye nesiFrentshi, angayifunde isiFrentshi. Ukufunda isiFrentshi ngamathuluzi afanelekileyo kumgangatho kubalulekile, kwaye kukho ingozi engokoqobo yokuba izinto ezimbi ziyakonakalisa ukuzithemba kwakho njengokuba ngumfundi wesiFrentshi.
Nokuba imnandi "I-Journal en Français Facile" ye-Radio France Internationale inzima kubaqalayo bokwenene. Kunoko, abaqalayo baya kwenza kakuhle ukuphulaphula iingoma zesiFrentshi baze bafunde amazwi ambalwa ngentliziyo, babukele amafilimu eFrentshi kunye nemibhalo engezantsi, bambambe iphephancwadi laseFransi uze ufumane ingcamango yolwimi olubhaliweyo olutshanje. Kuhle ukuzonwabisa kunye nezinto ezinxulumene nesiFrentshi ezikufutshane nawe, kodwa azikwazi ukuthathwa njengezixhobo ezinzulu zokufunda zabaqalayo.
Eyona miphumo emihle, uya kufuneka Utyalole kwizifundo eziHlangeneyo
Isishwankathelo, kunokwenzeka ukufunda isiFrentshi esikhululekile ukuba umntu uhleleke kakuhle, unolwazi olomeleleyo lwegrama yelwimi lwesiFrentshi kwaye ulandela isicwangciso sekhosi esicatshangelwe kakuhle. Kodwa zonke ezi zibonelelo zikhululekile ziyakuthathwa nje njengencedisayo ekufundiseni izifundo, kwaye ekugqibeleni, abaninzi abantu badinga ukhokelo oluvela kwizakhono ukulungiselela isicwangciso sekhosi esisebenza.
Uninzi lwabafundi baya kufuna ukutyalomla ubuncinci imali kwinkqubo yokufunda isiFrentshi. Oku kungathatha inqanaba leeklasi zaseFransi, abaqeqeshi kunye neenkqubo zokuntyingisa. Emva kokuba abafundi bafikelele kwinqanaba elithile lobuchule, ukuzifunda ngokwabo kungabonwa. Ngelo xesha, abafundi baya kukhangela izixhobo ezintle zokufunda isiFrentshi . Landela izixhumanisi kulo mhlathi ukuze uthole ulwazi olunzulu malunga nazo zonke ezi ngongoma.
Iimpazamo eziphezulu zaseJamani ezenziwe ngabaqalile
Iilwimi zesiFrentshi iiTisue - Les Virelangues
Ukufikelela Okukhululekile kwiincwadi zezingane zaseJapan kwi-"Ehon Navi" yeSayithi
Ukuphulaphula iipodcasts ngesiJamani
Mandarin IsiGaba esiPhezulu
Iingcebiso ze-MBA Essay
Indlela yokudibanisa "i-Porter" (ukuGqoka, ukuThatha) ngesiFrentshi
Yiyiphi i-DJs eyenzileyo?
11 Iimfono zeBhola ezimnandi kwi-'Cididbillies '
Uluhlu lweeNtlanzi eziZintlanu zeNgcaciso zeNtetho zeBantwana
Imindeni ye-Element yeTeri yePeriodic
Yimangalisa! I-Lexus LC 500h ibonakalisiwe